Wakhiwa kanjani umlingiswa? - Mytika Speak
Ikhaya / Abalingiswa Nezici / Umlingiswa wenziwa kanjani?
Your uhlamvu kuwumkhuba owenziwe nguwe. Unquma ukuthi ungathanda ukuziveza kanjani emithonjeni ehlukahlukene efana nokulindelwa umphakathi, izibopho zomndeni, ezokuzijabulisa, njll.
Isibonelo, ngenkathi ekhula, uChris wayehlale ekujabulela ukubukela ama-movie alingisa uBruce Willis. Ngokuhamba kwesikhathi, uqala ukukhuluma njengoBruce Willis futhi alingise izindlela zenkanyezi yesenzo nesitayela sezingubo. UChris wenza isimilo sakhe ngokucophelela ukuze afane nomuntu amthandayo. Uma abantu bekhuluma noChris, uphendula ngisho nendlela acabanga ukuthi uBruce Willis uzophendula ngayo. Ngelinye ilanga, uChris uqala ukuncoma usomahlaya uDane Cook ngemuva kokuzwa amanye amantombazane ekhuluma ngokuthi angafuna kanjani ukuthandana nomuntu ahlekise. Ngokwazi, uChris uqala ukushintsha isimilo sakhe kube uhlobo oluhlekisayo lukaBruce Willis. Eminyakeni embalwa kamuva esidlweni somndeni, uChris ulalela ubaba wakhe exoxa izindaba zokuthi wayemazisa kanjani umngani wakhe owayeyindoda ehambe kahle. Ekulangazelela ukwamukelwa nguyise, uChris unquma ukuqala ukuhlela ukuhambela ama-adventure phesheya kwezilwandle emazweni ahlukahlukene. Isimo sakhe sizodlula kwezinye izinguquko eziningi njengoba ziguquka ngokuya ngamathonya akhe.
Ngicabanga ukuthi iningi labalingiswa lidalwe ngokungazelelwe ngezinto esizithandayo. Kufana nokuthenga, ubona into oyithandayo bese uyayicosha. Ngithola ukuthi lapho abantu bezungeza abanye abanezimfanelo ezinhle, lezi zimfanelo ziyakhuculiseka. Lokhu kungenzeka kungenzeki ngamabomu kepha uma sifuna kwenzeke, manje sesinendlela yokuthonya isimilo sethu ngamabomu.
Amathegiuhlamvu ukuqonda wadala ukukhula komuntu siqu ingokomoya